Ikhathoni esongwayo
Idatha entsha ekhethekileyo evela kwaSmithers ibonisa ukuba kwi-2021, ixabiso lehlabathi lemarike yokupakisha yeebhokisi zokugoqa liya kufikelela kwi-$ 136.7bn;nge-49.27m yeetoni ezisetyenzisiweyo kwihlabathi jikelele.
Uhlalutyo oluphuma kwingxelo ezayo 'Ikamva lokuSonga iikhathoni ukuya ku-2026' libonisa ukuba esi sisiqalo sokuhla kwentengiso ngo-2020, njengoko ubhubhani we-COVID-19 ubenempembelelo enkulu, ebantwini kunye noqoqosho.Njengoko iqondo lesiqhelo libuyela kubathengi nakwimisebenzi yorhwebo, iSmithers iqikelela isantya sokukhula sonyaka esihlanganisiweyo sexesha elizayo (CAGR) nge-4.7% ukuya kuthi ga ngo-2026, sityhalela ixabiso lemakethi ukuya kuthi ga kwi-172.0 yezigidigidi zeedola kulo nyaka.Ukusetyenziswa komthamo kuya kulandela ubukhulu becala oku nge-CAGR ephakathi kwe-4.6% ngo-2021-2026 kuzo zonke iimarike zelizwe kunye nezengingqi ezingama-30 iingoma zophononongo, kunye nemiqulu yemveliso efikelela kwiitoni ezingama-61.58m ngo-2026.
Ukupakishwa kokutya kubonisa eyona marike inkulu yokusetyenziswa kokuphela kweekhathoni ezisongayo, ezibalelwa kwi-46.3% yemarike ngexabiso ngo-2021. Kuqikelelwa ukubona ukonyuka komda kwisabelo semarike kwiminyaka emihlanu ezayo.Ukukhula ngokukhawuleza kuya kuvela ekutyaleni okubandayo, okugciniweyo, kunye nokomileyo;kunye ne-confectionery kunye nokutya kwabantwana.Kuninzi lwezi zicelo zokusonga iifomathi zeebhokisi ziya kuzuza ekwamkelweni kweethagethi zozinzo ngakumbi ekupakishweni- kunye nabavelisi abaninzi abakhulu be-FMGC bezibophelela kwizibophelelo ezingqongqo zokusingqongileyo ukuya ku-2025 okanye ngo-2030.
Indawo enye Apho kukho indawo yokwahlukahlukana kukuphuhlisa iibhodi zeebhokisi ezizezinye kwiifomathi zeplastiki zesiqhelo ezinje ngeepakethi ezithandathu okanye izisongelo ezicuthayo zeziselo ezinkonkxiweyo.
Izixhobo ze-Eureka zinokusebenza ezi zinto zilandelayo xa kusenziwa iibhokisi ezisongwayo:
Umatshini wokusika umbhede weflethi
Umatshini oshushu we-foil-stamping
Umatshini wokudibanisa iifestile
Umatshini wokulayita ifilimu